သတင်း - Nantong ပုရွက်ဆိတ် Machinery Co. , Ltd မှ
Power က Trowel
တစ်ဦးကစက်တစ်ခုပါဝါအရင်းအမြစ်နှင့်ပါဝါဂီယာစနစ်၏ပါဝင်ပါသည်, သောအာဏာထိန်းချုပ်ထားလျှောက်လွှာကိုထောက်ပံ့ပေး. မကြာခဏထုတ်လွှင့်အခြားစက်ကိရိယာတစ်ခုလှည့်ပါဝါအရင်းအမြစ်မှအမြန်နှုန်းနှင့် torque ဘာသာပြောင်းပေးဂီယာနဲ့ဂီယာရထားများကိုအသုံးပြုသောဂီယာအုံမှရိုးရှင်းစွာရည်ညွှန်းသည်
အဘယ်အရာကို plug ကိုတစ်စင်းအားဖြစ်ပါတယ်?
တစ်ဦးကတစ်စင်းအား plug ကိုလျှပ်စစ်မီးပွားအားဖြင့်ချုံ့လောင်စာ / လေထုအရောအနှောလောင်ကျွမ်းဖို့မီးပွား-စက်နှိုးအင်ဂျင်များ၏လောင်ကျွမ်းခြင်းအခန်းထဲကဖို့စက်နှိုးစနစ်အထဲကနေလျှပ်စစ်လက်ရှိပို့ဘို့ကိရိယာဖြစ်ပါသည်, အင်ဂျင်အတွင်းတွင်လောင်ကျွမ်းဖိအားများအနေဖြင့်. တစ်ဦးကမီးပွား plug ကို shell ကိုပေါင်းလိုက်သောသတ္တုရှိပါတယ်,
ကယ်လီဖိုးနီးယား Air ကိုအရင်းအမြစ်များဘုတ်အဖွဲ့, ထို့အပြင် CARB သို့မဟုတ် ARB အဖြစ်လူသိများ, အဆိုပါဖြစ်ပါသည်" ကယ်လီဖိုးနီးယားအစိုးရထဲမှာ. စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1967. CARB ကက်ဘိနက်-Level ကယ်လီဖိုးနီးယားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအေဂျင်စီအတွင်းဌာနဖြစ်ပါသည်. ကယ်လီဖိုးနီးယားထိုကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းအေဂျင်စီရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းတည်းသောပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါဟာဖက်ဒရယ် Clean Air ကိုအက်ဥပဒေကျမ်းပိုဒ်မတိုင်မီတဦးတည်းရှိခဲ့ကြောင်းတည်းသောပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းက
နေအိမ် လွန်ခဲ့သော 123456နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံး - Total 17 1 မှတ်တမ်�စုစုပေါငျး��ားလက်ရှိစာမျက်နှာ / Total63 စာမျက်နှာနှုန်း
No.1118 Fuyuan လမ်း,Qidong,Jiangsu ပြည်နယ် 226200 ,တရုတ်နိုင်ငံ